Miorina avo lenta haingam-pandeha fanaovana kaopy taratasy fanaovana milina sy mpanamboatra | Masinina Chengda
Milina fanaovana kaopy haingam-pandeha haingam-pandeha
Ny milina kaopy taratasy marani-tsaina Shunda SMD-90 dia mampiasa lamina desktop, izay mitoka-monina ny ampahany sy ny bobongolo.Ny ampahany amin'ny fandefasana dia eo ambanin'ny birao, ny bobongolo dia eo amin'ny latabatra, ity layout ity dia mety amin'ny fanadiovana sy fikojakojana.
Ny masinina dia mandray fanosorana automatique automatique, rafitra famindrana axis longitudinal, rafitra indexing cylindrical karazana barika ary ny drive gear, miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny kalitaon'ny milina iray manontolo.
Ho an'ny faritra elektrika, PLC, fanaraha-maso ny photoelectric ary famahanana servo no ampiasaina hifehezana ny fizotrany. Ny fahaizan'ity masinina karazana ity dia mahatratra 100-120pcs kaopy / min, mety amin'ny famokarana kaopy mangatsiaka / mafana 4-46 grama.
1.Ny ampahany mekanika dia azo antoka mandritra ny 3 taona, ny faritra elektrika dia azo antoka mandritra ny 1 taona.
2.Ny ampahany rehetra amin'ny latabatra mamorona dia mora idirana amin'ny fikojakojana.
3.Ny faritra rehetra eo ambanin'ny latabatra dia mihosotra amin'ny fandroana diloilo. Ny menaka dia tokony ovaina isaky ny 4-6 volana amin'ny menaka voatondro.
1.Famoahana vokatra hatramin'ny 50 000 kaopy isam-bidy (adiny 8), kaopy 4,5 tapitrisa isam-bolana (3 shift);
2.Percentage of pass dia avo kokoa noho ny 99% eo ambanin'ny famokarana mahazatra;
3.One mpandraharaha iray dia afaka mitantana milina maro amin'ny fotoana iray.
Fiara miendrika zoro vertika, cam indexing barika cylindrical, manatsara ny endrika anatiny, hahazoana antoka fa marina ny fampitana ny masinina, fahombiazan'ny fampifanarahana avo lenta, mba hahatratra ny fandrindrana eo amin'ny dia mba hisorohana ireo faritra simba amin'ny fifandonana, mamorona ny jitter drive sy ny fifindrana Tsy malama tsy ampy hatrany hatrany Congenitally.
Firafitry ny tranga ankapobeny
Ny famolavolana ny firafitry ny milina, ny fanosorana menaka fanosorana menaka, mampihena ny fahamendrehana sy ny ranomaso, ny fanaparitahana ny hafanana mahomby, ny milina mihazakazaka haingana. Ny fiantohana milina mandritra ny telo taona.
Andrim-panjakana roa mikorisa
Ny curling voalohany miaraka amin'ny fanitarana anatiny ny famolavolana rotary, dia manampy amin'ny fanatsarana ny taratasy mamorona tanjaka; stereotypes fanafanana curling faharoa, volume tsara, fahamarinan-toerana.
Rafitra sary an'ny CCD
Ny fahitana ny kaopy (vilia) eo alohan'ilay boky sy ny faritra anatiny misy ny tasy, moka, pinhole, vava mihorona vaky, ketrona. 2, ny kaopy detection (lovia) ao ambadiky ny farany ambany sy ny faritra misy mony ny moka, moka, pinholes, flanging knurled, ny faran'ny taratasy may mavo, ambany crescent, amin'ny faran'ny tonon-taolana.
1, rafitra maodely marobe. Ampiasao ny bitsika tsindry tsotra hitarika anao, safidio ny modely napetraka.
2, fanovana paramètre azo ovaina. Azonao atao ny mamerina, mamerina, na mamerina ireo masontsivana amin'ny orinasa. Azonao atao koa ny manova ny masontsivana amin'ny tanana amin'ny antsipiriany.
3, fananganana fiaviana encoder malefaka sy fitarihana fanovana mandeha ho azy ary fizahan-toetra ny hadisoana. Ny fametrahana fitaovana enkoder dia tsy mila mandinika ny toerana misy azy, azonao atao tsara ny mametraka ny rindrambaiko.
4, amboary ho azy ny toerana ipetrahana, latsaky ny iray ny lapoany ambany ambany. Rehefa voalamina, ny milina dia manisa ho azy ny halaviran'ny inertia an'ilay masinina, dingana iray farafahakeliny haingana kokoa noho ny toerana aorian'ny fihenam-bidy.
5, ny rafitry ny sensor key station dia manisa ny fikajiana ho azy sy ny famantarana azy. Amin'ny alàlan'ny fandidiana tsotra hanombohana ny bokotra dia mety hitranga amin'ny famoahana tsy fahombiazana, ny rafitra dia manara-maso ny famantarana avy hatrany araka ny sensor, nijanona teo afovoan'ny heaters roa ny bobongolo.
6, ajanony ho esorina ho azy ny kaopy. Aorian'ny fijanonan'ny masinina tsy ara-dalàna, dia hesorin'ny rafitra ho azy ny heater ary ny toeran'ny bracket noho ny heater may ary ny adhesive dia tsy kapoaka mahery.
7, rafitra fanamafisana ny fanaraha-maso ny mari-pana. Amin'ny alàlan'ny mari-pana fanaraha-maso PLC PID, ny mpampiasa dia misafidy fotsiny ny mpanamboatra taratasy, ny lanjany, ny PE / tokana / avo roa heny, ny rafitra dia hametraka ho azy ny maripana kendrena mifanaraka amin'izany, ary miova ny hafainganam-pandehan'ny masinina rehefa novaina ho azy ny mari-pana kendrena. Ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny tsindry fifehezana mari-pana kendrena ihany koa.
8, fahitana ny lesoka amin'ny rafitra hita maso. Famantarana mandeha ho azy ny endrika kaopy taratasy, lesoka anatiny, farany ambany, fanesorana mandeha ho azy. Algorithme tsy manam-paharoa, ny fankatoavana tasy volondavenona mazava sy marina. Fanalahidy hametrahana haingana ireo masontsivana, fa afaka manova ny masontsivana tsirairay amin'ny antsipiriany. Manohana ny tatitra momba ny fanaraha-maso ny tambajotra anatiny ny rafitra.
9, rafitra fanaraha-maso fitaovana. Ny teboka avoakan'ny plc, ny relay, ny contactors, ny plc ary ny efijery, ny plc ary ny solosaina, ny plc miaraka amin'ny fanitarana ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy, ny fanairana tsy manara-penitra ao amin'ny efijery mikasika no mahatonga ny tsy fahatomombanana. Fampahalalana momba ny tsy fahombiazan'ny lozisialy sy ny lozisialy, ny mpampiasa araky ny bitsika mba hamahana olana mora foana.
10, ny rafitra dia manohana fanavaozana lavitra. Plc sy efijery mikasika amin'ny alàlan'ny fifandraisana Ethernet haingam-pandeha, azonao atao ny manova ny adiresy ip plc sy ny efijery ip, amin'ny alàlan'ny NAT na mpanome serivisy hafa hanavaozana lavitra.
Teo aloha: Mpankafy taratasy / ravin-taratasy / taratasy ambany ho an'ny kaopy taratasy
Manaraka: Masinina STD-80 mahitsy